Yakha ibhulogi ngokushesha nje | Polyblog
Yakha ibhulogi ngokushesha nje
I-Polyblog Ikusiza Ukwakha Kalula Ibhulogi Yezilimi Eziningi Futhi Ukhulise Ibhizinisi Lakho Ngokumaketha Okuqukethwe.
Kungani usebenzisa i-polyblog?
Ukusheshisa nokusebenza kahle kubalulekile kunoma yiliphi ibhizinisi. Siyakuqonda lokho ngakho-ke sakhe inkundla esheshisa yonke inqubo yakho yokumaketha okuqukethwe.
2. Humusha okuqukethwe kwakho kalula
Khomba noma yiliphi izwe nanoma yiluphi ulimi futhi ukhulise ibhizinisi lakho emazweni ngamazwe. Usebenzisa Uhlelo lwethu Lokulawula Okuqukethwe, ungakwazi ukuphatha kalula ibhulogi yakho enezilimi eziningi ngaphansi kwedeshibhodi eyodwa.
3. Idizayini encane
Sikholelwa ekululameni. Yingakho sizokwenza ibhulogi yakho ihlanzeke futhi ibe lula ekuklanyweni. Nasi isampula yokuthi ibhulogi yakho izobukeka kanjani uma uyakha nge-Polyblog.
4. I-SEO yenziwe kahle
I-SEO iyisisekelo sayo yonke imizamo yakho yokuthengisa okuqukethwe. Ukuthola ithrafikhi yosesho lwendalo ku-Google kubalulekile kunoma iyiphi ibhulogi. Kungakho sisebenzise izinsiza eziningi ukwenza ibhulogi yakho i-SEO ibe nobungane.
5. Ukusingathwa okuphethwe ngokugcwele
Asikho isidingo sokubhekana nekhanda elibuhlungu lokuphatha amaseva akho. Sinikeza ukusingathwa kwewebhu okusheshayo nokuthembekile.
Amanye amaqiniso athakazelisayo mayelana nokumakethwa kokuqukethwe
“Amaphesenti angu-77 abantu afunda njalo amabhulogi ku-inthanethi”
“Amaphesenti angu-67 ama-blogger athumela nsuku zonke athi aphumelele”
“Amaphesenti angu-61 abasebenzisi be-inthanethi e-US bathenge okuthile ngemva kokufunda ibhulogi”
1. Bhalisa futhi usethe
Bhalisa nge-Polyblog futhi uhlanganise i-Polyblog newebhusayithi yakho. Udinga ukufaka ikheli lakho le-imeyili kanye nesizinda sewebhusayithi.
2. Engeza izindatshana
Uma izindatshana zakho sezilungile, ungangeza kubhulogi yakho usebenzisa ideshibhodi yePolyblog. Uma usuwashicilele, okuqukethwe kwakho kuzoba bukhoma kubhulogi yakho.
3. Landelela ukukhula kwakho kwe-SEO kukhonsoli yakho yosesho
Sizokubhekelela i-SEO yobuchwepheshe. Sizokwenza ngokuzenzakalelayo amamephu esayithi futhi siwalayishe ku-Google Search Console yakho. Odinga ukukwenza ukulandelela ukukhula kwakho ku-Google Search Console.
Ngingakwazi ukusebenzisa isizinda ngokwezifiso?
Yebo, ungasebenzisa isizinda ngokwezifiso nazo zonke izinhlelo zethu. Uzodinga nje ukusetha isizinda sakho ngesistimu yethu.
Uyini umehluko phakathi kwePolyblog nezinye izinhlelo zokuphatha okuqukethwe?
I-Polyblog yakhelwe ngokukhethekile ukuphathwa kokuqukethwe ngezilimi eziningi. Ziningi izinzuzo zokumaketha okuqukethwe ngezilimi eziningi kodwa ngokuvamile ukukusebenzisa kunzima. I-Polyblog yenza kube lula kakhulu ukuphatha nokukhuthaza ibhulogi enezilimi eziningi.
Ingabe kufanele ngithuthukise ibhulogi yami ngesivinini sekhasi nezinye izici zobuchwepheshe ze-SEO?
Akunjalo, i-Polyblog isivele ilungiselelwe zonke izici ezibalulekile zobuchwepheshe ze-SEO njengesivinini sekhasi, ukwakheka kwesixhumanisi, imephu yesayithi, ama-meta tags, nokuningi.
I-Polyblog yakhelwe ngokukhethekile iziqalo ezifuna ibhulogi esheshayo nesabelayo ohambweni lwazo lokuqala lokumaketha okuqukethwe.
Ingabe ngidinga ukufaka ama-plugin nezindikimba?
I-Polyblog isivele iza netimu ehlanzekile, ephendulayo futhi zonke izici ozozidinga zifakwe kuqala. Ngale ndlela ungaqala ngebhulogi yakho ngokushesha futhi ugxile ngokucacile ekushicileleni okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu ngaphandle kokukhathazeka kakhulu ngobuchwepheshe.
Ungangibonisa isibonelo sebhulogi eyakhiwe nge-Polyblog?
Impela, hlola ibhulogi yelinye lamakhasimende ethu aphezulu: https://www.waiterio.com/blog
Sibhalele wethu vele uthi Hello